माटो खेती को सबै प्रकार प्रदर्शन, र त्यो पनि ट्रली, घास काटन मिसिन, पम्प, snowthrower काम र यति मा। ई, स्टोर बगैचा मशीनरी, प्रदर्शनी र साइटहरू र अनलाइन स्टोर को बिक्री प्रस्ताव multifunction मिसिन को विशाल चयन।
को जोताइ मशीनरी निम्न रूसी बजार मा:
- हिंड्न-पछि "ओका" र "क्यासकेड", "Neva" - JSC "लाल अक्टोबर" को निर्माता, सेन्ट पीटर्सबर्ग;
- "Sadko" - निर्माता Rezhsky यांत्रिक प्लान्ट, Rezh, Sverdlovsk क्षेत्र;
- "MIC-2" - निर्माता JSC "गियर", इजेभ्स्क;
- "LADA - BGH01" निर्माता समारा यांत्रिक प्लान्ट "सलाम", सामारा।
अमेरिकी र युरोपेली उत्पादनहरू: वाइकिंग, Efco, Caiman, Grillo, BCS, शिल्पकार, Pubert, EUROSYSTEMS, HUSQVARNA, MTD। अन्तमा, चिनियाँ सामान: Crosser, Huter, SunGarden, WEIMA, Kipor, Greenfield, WEIMA।
कारण माल र चिनियाँ उत्पादन प्रविधि कारखाना उपकरण एकाइहरु मा धातु र सस्तो श्रम गुणस्तर, साथै बचत गर्न सबै भन्दा कम र किफायती मूल्य छ। यो एमबी-1 को रूसी समूह को लगभग सही प्रतिहरू छ (हिंड्न-पछि "ओका", "Neva", "Salyut-5"), तर कम गुणस्तर। इटालियन र फ्रान्सेली एकाइहरु विश्वसनीय छन्, तर रूसी आफ्नो लागत संग बराबर मापदण्डहरू धेरै उच्च छ। त्यसैले, मूल्य र गुणस्तर को मामला मा सबै भन्दा राम्रो र सबै भन्दा कारगर विकल्प - रूसी तंत्र।
एक पैदल-पछि कसरी चयन गर्ने? एकाइ मोडेल को विकल्प मा गल्ती नगर्न, तपाईं देश वा निजी घरपरिवारमा सञ्चालन समयमा आवश्यक छन् भनेर कार्यहरु परिभाषित गर्न आवश्यक छ। उसलाई (एक छिमेकी लिएर, उदाहरणका लागि) काम गर्न - यो विशेषज्ञहरु र विक्रेता संग परामर्श गर्न मात्र होइन, तर पनि संयन्त्र, अझ राम्रो अन्वेषण गर्न आफ्नो काम बारे एक भिडियो, अरूसित तुलना हेर्न, र उचित छ। जब संरचना तिर्न ध्यान र स्टक गियर को बल, साथै गर्न मोटर छनौट। यो संयन्त्र तपाईं मात्र रोकथाम को संभावना ध्यान गर्नुपर्छ त, एक लामो समय को लागि मजबूती काम, तर पनि मरम्मत गर्नुपर्छ।
Motoblock "ओका" र यसको परिमार्जन सबै - सबै भन्दा राम्रो, समय-परीक्षण मोडेल को एक। कार्यक्षमता को एक विस्तृत श्रृंखला backyards मा फारमहरु मा काम गर्न, शहर वर्गहरूको र पार्क मा सफाई, walkways, lawns लागि संयन्त्र को आवेदन सक्षम बनाउँछ। विविध संलग्नहरू - र आलु कटर, किसान र raspashnik हलो (Ridger) र हैरो, ट्रली र रोटरी हिउँ removers, एक बेल्चा र motoblochnaya vykapyvatel - यो एकाइ को प्रयोग को दायरा विस्तार।
एक पैदल-पछि जहाँ किन्न बारेमा प्रश्न, लगभग उत्पन्न गर्दैन। खरीदार एक गुणस्तर पत्ता लगाउन महत्त्वपूर्ण हो, प्राविधिक संलग्नहरू संयन्त्र सुसज्जित। प्राविधिक पसलहरुमा मोडेल र मूल्यहरू बगैचा हेर्न, प्रस्तावहरू तुलना पनि ढुवानी लागत (कहिले काँही यो निःशुल्क छ) संग किन्न सस्ता र गुणस्तरीय तरिका प्रदान र आदेश कुनै पनि मोडेल उद्धार गर्न तयार छन् सक्नुहुन्छ अनलाइन स्टोर।
Motoblock 'ओका' अयोग्य चार स्ट्रोक पेट्रोल इन्जिन लीफान, सुबारु, KADVI वा Briggs र स्ट्रैटन बारेमा 74 सेमी को कब्जा मा 20 सेमी जमीनमा खेती गहिराई लागि डिजाइन गरिएको छ शक्ति जो। यी आर्थिक इन्जिन प्रति घण्टा ग्याँस को2लिटर, धेरै चुपचाप चलाउन उपभोग। मिसिन को ट्रेलर 350 किलो तौल पुल गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पूरा गर्न सुविधाजनक र कार मा फिट गर्न सजिलो (न्यूनतम disassembly संग) छ। यो भन्दा मांग मोडेल मा लोकप्रिय छ।
बिजुली "पर्यवेक्षक": समीक्षा, विनिर्देशों, मोडेल र सुविधाहरू
प्राथमिक उत्पादन लागत र उद्यम योजना को प्रदर्शन को लागि लेखांकन
के veranda छत फरक छ। निर्माण विशेषताहरु
Escapism - यो के हो? लक्षण, कारण, उपचार